Kutheni ujoliso loMxholo lubalulekile kubaThengisi abaHamba ngeKuki-kwixa elizayo Martech Zone
Siphila kutshintsho lweparadigm yehlabathi, apho iinkxalabo zabucala, kunye nokusweleka kwecookie, kubeka uxinzelelo kubathengisi ukuba bahambise imikhankaso yabantu kunye novelwano, kwiindawo ezikhuselekileyo zorhwebo. Ngelixa oku kuzisa imiceli mngeni emininzi, kukwabonisa amathuba amaninzi kubathengisi ukuba bavule amaqhinga ajolise ngakumbi ekujongeni umxholo.
Ukulungiselela ikamva elincinci leCookie
Umthengi okhulayo ngokufihlakeleyo ngoku uyayikhaba i-cookie yomntu wesithathu, ngengxelo ka-2018 etyhila iipesenti ezingama-64 zeicookies ziyaliwa, nokuba kungoku ngesandla okanye nge-ad blocker- kwaye oku bekuphambi komthetho omtsha wabucala omiliselwa. Ngaphezulu koku, iipesenti ezingama-46 zeefowuni ngoku ziyalahla malunga ne-79% yeicookies, kunye neemetriki ezisekwe kwicookie zihlala zigqithile ekufikeleleni nge-30-70%.
Ngo-2022, uGoogle uza kuyikhupha ikuki yomntu wesithathu, into esele yenziwe yiFirefox kunye neSafari. Inikwe iiakhawunti zeChannel ze ngaphezulu kwe-60% yokusetyenziswa kwesikhangeli sewebhu, Le yinto enkulu kubathengisi kunye nabathengisi, ngakumbi abo basebenzisa inkqubo. Ezi bhrawuza zisaza kuvumela ii-cookies zomntu wokuqala-ubuncinci okwangoku- kodwa eyonanto icookie ayinakuphinda ithembeke kuyo kakhulu ukwazisa ukujolisa ekuziphatheni.
Yintoni ukujolisa kumxholo?
Ukujolisa kumxholo yindlela yokujolisa kubaphulaphuli abafanelekileyo usebenzisa amagama aphambili kunye nezihloko ezivela kumxholo ojikeleze uluhlu lweentengiso, ezingadingi kuki okanye esinye isazisi.
Ukujoliswa komxholo kusebenza ngale ndlela ilandelayo
Umxholo ojikeleze Uluhlu lweentengiso kwiphepha lewebhu, okanye ngenene izinto kunye nemixholo ekhoyo ngaphakathi kwevidiyo, ziyakhutshwa zigqithiselwe kwinjini yolwazi.
Injini isebenzisa algorithm ukuvavanya umxholo ngokusekelwe kwiintsika ezintathu, 'ukhuseleko, ukufaneleka nokufaneleka' kunye nomxholo apho uveliswa khona.
Izisombululo ezihambele phambili zinokubeka ngaphezulu idatha yexesha lokwenyani inxulumene nomxholo wombukeli mzuzwini intengiso ijongiwe kwaye yahlulwe, ngokungathi isimo sezulu sishushu okanye siyabanda, kusemini okanye kusebusuku, okanye lixesha lesidlo sasemini.
Ukongeza, endaweni yemiqondiso esekwe kwicookie, isebenzisa elinye ixesha lokwenyani imiqondiso esekwe kumxholo, ezinje ngokusondela komntu kwindawo enomdla, ngaba ekhaya, okanye bayahamba, njl.
ukuba ukufaneleka kwamanqaku idlula umqobo wabathengi, iQonga leMfuno eseMbindini (i-DSP) iyaziswa ukuba iqhubeke nokuthenga kweendaba.
Ukujoliswa kwemeko ekujolise kuyo kuhlalutya isicatshulwa, iaudiyo, ividiyo, kunye nemifanekiso yokwenza umxholo ojolise kumanqaku athelekiswa neemfuno ezithile zomthengisi, ukuze intengiso ibonakale kwindawo efanelekileyo nefanelekileyo. Umzekelo, inqaku leendaba malunga neAustralia evulekileyo linokubonisa uSerena Williams enxibe izihlangu zentenetya, kwaye intengiso yezihlangu zemidlalo inokuvela kwindawo efanelekileyo. Kule meko, okusingqongileyo kufanelekile kwimveliso.
Ukujolisa kwimeko elungileyo kukwaqinisekisa ukuba imeko ayinxulunyaniswa gwenxa nemveliso, ke kulo mzekelo ungasentla, kuya kuqinisekisa ukuba intengiso ayiveli ukuba inqaku belingalunganga, iindaba ezingezizo, ezinomkhethe wezopolitiko okanye ulwazi olungelulo. Umzekelo, intengiso yezihlangu zentenetya ayizukuvela ukuba inqaku limalunga nokuba izihlangu ezimbi zeetenisi zibangela njani iintlungu.
Ngaba isebenza ngakumbi kunokusebenzisa iiKuki zomntu wesithathu?
Ukujoliswa komxholo kubonisiwe ukuba kusebenza ngakumbi kunokujolisa usebenzisa ii-cookies zomntu wesithathu. Ngapha koko, olunye uphando lubonisa ukuba ukujoliswa komxholo kunokuba nakho Yandisa injongo yokuthenga ngama-63%, ngokuchasene nabaphulaphuli okanye ujoliso lwenqanaba lokujolisa.
Izifundo ezifanayo zifunyenwe I-73% yabathengi baziva iintengiso ezifanelekileyo kwimeko leyo igcwalise umxholo wonke okanye amava evidiyo. Ngapha koko, abathengi ekujoliswe kubo kwinqanaba lomxholo babenjalo Ngama-83% amathuba okuba bacebise ngemveliso kwintengiso, kunezo kujoliswe kuzo kubaphulaphuli okanye kwinqanaba lesitishi.
Ukuthandeka kwegama lophawu ngokubanzi I-40% ephezulu kubathengi ekujoliswe kuyo kwinqanaba lomxholo, kwaye abathengi banikezela ngeentengiso zemixholo baxela ukuba baya kuhlawula ngaphezulu uphawu. Okokugqibela, iintengiso ezinokubaluleka okungumxholo ziye zaphakanyiswa I-43% ngaphezulu yokuzibandakanya kwe-neural.
Kungenxa yokuba ukufikelela kubathengi kwisimo esifanelekileyo sexesha elifanelekileyo kwenza ukuba iintengiso zivuseleleke ngcono, kwaye ke oko kuphucula injongo yokuthenga kude kakhulu kunentengiso engafanelekanga elandela abathengi kwi-intanethi.
Oku akumangalisi. Abathengi bahlaselwa ziintengiso kunye nentengiso mihla le, befumana amawaka emiyalezo mihla le. Oku kufuna ukuba bacofe ngokufanelekileyo umyalezo ongabalulekanga ngokukhawuleza, ke kuphela imiyalezo efanelekileyo ifikelela ekuqwalaselweni ngakumbi. Sinokubona oku kucaphukisa kwabathengi kwibhombu ebonakaliswe kukonyuka kokusetyenziswa kweebhlokhi zentengiso. Abathengi, nangona kunjalo, bayayamkela imiyalezo ehambelana nemeko yabo yangoku, kwaye ukujoliswa komxholo kukonyusa ukubakho komyalezo ofanelekileyo kubo ngalo mzuzu.
Ukuqhubela phambili, ukujolisa kwimeko kuya kuvumela abathengisi ukuba babuyele kwinto ekufanele ukuba bayayenza - babumba unxibelelwano lokwenyani, olunyanisekileyo kunye novelwano nabathengi kwindawo elungileyo kwaye ngexesha elifanelekileyo. Njengokuthengisa kubuyela kwikamva ', ujoliso kwimeko iya kuba yeyona ndlela ikrelekrele nekhuselekileyo eya phambili yokuqhuba imiyalezo ebangcono, enentsingiselo ngakumbi kwintengiso kwinqanaba.
Funda ngakumbi ngokujolisa komxholo kwiphepha lethu elimhlophe:
Khuphela umxholo ojolise kwithagi
tags: ch cookies cookiesIntengiso yomxholoukuthengisa kwimekoUkujolisa kumxholoNgaphantsi kwecookiecookiesikuki firefoxii cookies
UTim ngumcebisi ophambili weqhinga elinamava ngaphezulu kweminyaka engama-20 esebenza kwimpambano yentengiso kunye netekhnoloji. Unomdla wokuqhuba amava angcono kubathengi kunye neziphumo zeshishini ezinamandla, uTim wajoyina iSilverbullet njengeGM yeQhinga loBuchule ngoDisemba 2019.
Phendula: Zenzekelayo ukuThengisa kwakho ngokuzibandakanya nokuNxibelelana kwe-imeyile kunye nokuFikelela